आजको राशिफल : मिति २०७५ साल चैत्र २५ गते तृतीया तिथि सोमबार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आजको राशिफल : मिति २०७५ साल चैत्र २५ गते तृतीया तिथि सोमबार
डिसी नेपाल , २५ चैत्र २०७५
आज मिति २०७५ साल चैत २५ गते । तदनुसार इश्वी सन् २०१९ अप्रिल ८ तारिख। शकसंवत् १९४१ । परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु । नेपाल संवत् ११३९ चौलाथ्व। चैत्र शुक्लपक्ष। तृतीया तिथि सोमबार ।
अपरान्ह सम्म समय सामान्य अनुकुल देखिन्छ । समयमा गरेका काम सफल हुनेछन्,उचित लाभ पनि हुनेछ । काममा ढिला गर्दा आफुले लिने फाइदा अरुले लिने छन् । पठन पाठनमा कमै ध्यान जानेछ । आफन्तमा ऋण लगानी नगर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट घाटा त हुने छैन तर नाफा कम हुनेछ । साँझपख समयले धोका दिनेछ ।
समय अनुकुल देखिन्न । साना साना कुरामा पनि हेलचक्र्याई नगर्नु होला आफैलाई घाटा हुनेछ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी नबढाउनु होला । व्यापार व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन । अरुको विश्वास धेरै नपर्नु होला । नोकरीमा समस्या आउन सक्छ । अतिथि सत्कारमा धन खर्च हुनेछ । साँझपख समयले थोरै साथ दिनेछ ।
कार्य क्षेत्र छोडेर बाहिर नजानु होला भोली त्यो दिन आउने छैन । समयमा कार्य सम्पादन गर्नु होला । ढिला गर्दा अवसर अरुले छोप्ने छन् । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । आम्दानीलाई वचतमा परिणत गर्न भने गाह्रो हुनेछ । अरुको कुराको धेरै विश्वास नगर्नु होला । ऋण लगानी नगर्नु होला । साझपख खर्च बढ्नेछ ।
समयले साथ दिनेछ । कार्य तालिका बनाएर कार्य क्षेत्रमा जानु होला सफलताका सिढि चढ्न गाह्रो हुने छैन । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ । सहयोगी मित्र भेटिने छन् । साझेदारीमा काम नगर्नु होला । द्वन्दबाट टाढा बस्नु होला । साँझपख आफन्तहरु सँग भेटघाट हुनेछ ।
काममा पूर्ण सुधार होइन आँशिक सुधार आउनेछ । समस्याको समाधानका उपायहरु पत्ता लाग्नेछन् । उपकारी काममा समय बढि खर्च हुनेछ तर आफ्नो उपकार गर्ने कोहि हुनेछैन । घर छोडेर बाहिर जान मन लाग्नेछ । व्यवसाय परिर्वतनको चाहान बढ्नेछ । अध्ययन अध्यापन कार्य अगाडि बढ्ने छन् । वौद्धिक जगत सँग भेटघाट हुनेछ ।
दिनको अधिकाँश समय अनुकुल देखिन्छ । समयमा गरेका काम सफल हुनेछन् । लगानी अनुसार व्यापार व्यवसायबाट लाभ हुनेछ । ढिला सुस्ति र हेलचक्र्याईले आफैलाई घाटा हुनेछ । लगनशिलता बढाउनु होला । अरुको धेरै विश्वास र भरोसा नगर्नु होला । बढि महत्वकाँक्षी नबनि काम गर्नु होला । साँझपख घरयासी खर्च बढ्नेछ ।
समय सुधारोन्मुख देखिन्छ । विशेष गरेर अपरान्ह पछिको समय अनुकुल हुनेछ । काममा विस्तारै प्रगति हुनेछ । आर्थिक समस्या कम भएर जानेछन् । व्यापारमा क्रमिक सुधार आउनेछ । कार्य लगनशिलता विस्तारै बढ्नेछ । अरुको बोलीको विश्वासमा मात्रै अगाडि बढ्नु भयो भने दुख पाउनु हुनेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिकाको खोजी हुनेछ ।